Mooshinkii laga keenay xukuumada oo dib loo dhigay kadib muran fadhiga hareeyey (Dhegeyso) – Radio Daljir
Mooshinkii laga keenay xukuumada oo dib loo dhigay kadib muran fadhiga hareeyey (Dhegeyso)
Nofeembar 24, 2013 4:31 b 0
Muqdisho, November 24, 2013? – Kulankii baarlamanka federaalka Soomaaliya ee lagu soo gudbinayey mooshinka ka dhanka ah ra?isal wasaare Saacid ayaa fashilmay, kadib markii uu muran dhexmaray xillibaanada labbada dhinac kala taageersan ee gollaha joogay.
Mooshinka laga keenay xukuumada ayaa dib loo dhigay ilaa 30 bishaan.
Mooshinka ayaa laga hor akhriyey baarlamanka balse waxaa laga waayey saxiixa xillibaanada mooshinka keenay, taas oo keentay in muran badan uu ka dhasho gollaha, sidaas darteed gudoonka ayaa ku dhawaaqay in mooshinka dib loo dhigay.
Xillibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka tirsan baarlamanka isla markaasna Daljir la hadlay, waxaa uu sheegay in muranka ugu badan ee xillibaanada uu magacyada aan la shaacin, in kastoo gudoonka baarlamanka uu cuskaday qodobka 175 ee xeer hoosaadka baarlamanka.
Saxaafada ayaa banaanka ka joogtay kulanka, balse wararka aan helayno haatan waxay sheegayaan in kulanka lagu kala dareeray isla markaasna xillibaanada taageersan ra?isal wasaare saacid oo kulanka ka baxay ay haatan ku sugan yihiin hoteelka City Plaza ee Muqdisho.
Mudanayaasha taageersan ra?isal wasaaraha ayaa sharci daro ku tilmaamay mooshinka oo ah mid si qaldan loo soo diyaariyey sida ay tilmaameen, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xaruunta gollaha shacabka, balse weli macluumaad dhamaystirsan lama helin.
201 mudane ayaa gollaha soo xaadiray maanta, muran fara badan iyo soo gudbinta mooshinka kadib waxaa dhacday in dib u dhigis la sameeyo, arritan ayaa sii xoojinaya xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa ra?isal wasaaraha iyo madaxweynaha dalka
Dhegeyso Jamaal Faarax oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Xillibaan Maxamed Cumar Maxamuud
Meleteriga huwanta oo fariisin ciidan ka samaystay deegaano ku dhow degmada Buul-burte ee Hiiraan
Kenya iyo Uganda oo iskaashi ka yeelanaya baaritaan la xiriira weerarkii westgate mall ee Nairobi